Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Cali M. Axmad (Cali Yare) oo loo Doortay Gudoomiyaha Jaaliyadda Seattle
Dr. Cali M. Axmad (Cali Yare) oo loo Doortay Gudoomiyaha Jaaliyadda Seattle
Maalintii Sabtida ee taariikhdu ahyd 07dii bisha Fabraayo 2015 waxa ka qabsoomay magaalada Seattle Washington ee carriga Maraykanka doorashadii gudoomiyonimo ee jaaliyada S.Ogadenia ee magalada Seattle. Doorashadan oo sida caadiga ahba qabsoonta sanadkiiba mar ayaa waxa kasoo qaybgalay codkoodana dhiibtay xubnaha jaaliyada ee magaaladas.
Doorashadan aya sida xeerku dhigayo waxa soo qabanqaabisay guddi doorasho. Guddida doorashada oo ka koobnaa sadex xubnood ayaa waxay kaso dhexsaareen sadex xubnood oo ay marka u arkeen inay qabankaraan xilka gudoomiyanimo unasoo bandhigay xubnaha jaaliyada magalada Seattle. Halka laba xubnood oo kalana ay kudareen xubnaha jaaliyada ee kaso qaybgalay doorashada taas oo tirada musharixiinta kadhigtay 5 xubnood.
Doorashadan oo ahayd mid u qabsoontay si dimuqraadiyad a ayaa waxa lasiiyay xubin kasta warqad uu ku codeeyo kadibna waxa si habsamileh u bilowday codaynta oo ay gadhwadeen u ahaayeen guddiga qabanqaabada doorshada halkaas oo uu xubin kasta ugu codeeyay qofkii uu u arkayay inuu noqonkaro guddoomiyaha kadibna labilaabay tirinta codadka.
Dhamaadkii doorashada waxaa ku guulaystay mudane Dr. Cali Maxamed Axmed (Cali Yare). Dr. Cali Yare waa halgmaa rug cadaa ah, inbadana halganka Ogadenia kusoo jiray. Xilal farabadana meelo badan kasoo qabtay sida Minnesota, San Diego iyo Damaam Sucudi Carabia. Dr. Cali waa abwaan curiya gabayada iyo suugaan halgameedka. Waxaa intaasi u dheer waa suxufi usoo shaqeeyey sida saxaafada qorahay media iyo kuwa kaloo badan.
Gunaanadkii waxa xilka guddoomiyenimo si kalgacal iyo walaaltinimo ah ugu wareejiyay gudoomihii hore mudane Cabdullaahi Daahir ballana ku qaaday inuu si buuxda ulashaqayndoono guddoomihan cusub ee badalay halka xubnaha jaaliyaduna waji farxadleh kuso dhaweeyeen.